बाहिर काटाकाट भित्र चाटाचाट गर्नेहरु कसरी भए कट्टर दुश्मन ?
चैत ९, काठमाण्डाैँ ।
संसदीय पद्धतिमा सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्ष बीचको सम्बन्ध तित्ततापूर्ण होइन आलोचनात्मक हुन आवश्यक छ तर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अहिले बोलचालसमेत छैन । सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको यो दुश्मनीपूर्ण सम्बन्धले राष्ट्रिय राजनीति पक्कै प्रभावित हुन्छ नै । आखिर के असर पर्छ यी नेताको सम्बन्धले ? जोखिम र चुनौती के छन् ? शुक्रवार साप्ताहिकमा प्रकाशित विश्लेषण ।